‘मेरो आदर्श : मेरो विश्वास’ सार्वजनिक
२०७८ असोज २० बुधबार ०६:२३:००
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यद्वारा लिखित ‘मेरो आदर्श : मेरो विश्वास’ नामक संस्मरणात्मक कृति सार्वजनिक भएको छ । नेपालगन्जमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनको पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा. आचार्यले बिपी र पुष्पलालसँगका संस्मरण, उनीहरूको आचरण र व्यवहारलाई पुस्तकमा उतारेको बताए । कम्युनिस्ट आन्दोलनका वेला पुष्पलालसँग बनारसमा तीन वर्ष सँगै बिताएको र बनारसमा बिपीसँग भेट भएको कुरा उनले पुस्तकमा समेटेका छन् ।
उनले पुस्तकमा पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्मको नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमलाई पनि विश्लेषण गरेका छन् । दाङको कम्युनिस्ट आन्दोलन, दाङ–बनारस र तत्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्रसँगको सम्बन्ध, विद्यार्थी आन्दोलनसँगै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने राजनीतिलाई संस्मरणमा लेखेका छन् । उनले दलहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन, नेपालको भारत र चीनसँगको कूटनीति सम्बन्ध उनको पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ ।
पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रा.डा. गोपालप्रसाद शर्मा घिमिरेले आचार्यको पुस्तकले नेपाली राजनीतिको अवस्था र देशको वर्तमान परिस्थितिलाई उजागर गरेको बताए । राजनीतिमा देखिएको विचलनका कारण जनतामा निराशा छाएको बताउँदै पछिल्लो समय राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिवादी सिद्धान्त हाबी भएको उनले बताए ।
कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा परीक्षाबारेका मुद्दा हेदाहेर्दैमा